Content Writer သို့မဟုတ် သင်လိုအပ်ချိန်တိုင်း စာရေးပေးမယ့်သူလိုအပ်နေလား? | Online Service Center Myanmar -->
1. Online Shopping လုပ်နေတဲ့ Page ပိုင်ရှင်များ။
2. မိမိတို့ လုပ်ငန်းအတွက် Page ထောင်ထားပြီး စီးပွားရေးလုပ်နေသူများ။
3. မိမိတို့ ထုတ်ကုန်ကို အွန်လိုင်းကနေထိုးဖောက်ချင်သူများ။
4. မိမိတို့ Personal Page များ၊ အကောင့်များအတွက် စာရေးဖို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ Celebrity များ။
6. စာတွေရေးပြီးတင်ချင်ပေမယ့် မရေးတတ်၊ စာမစီတတ်ဘူးဖြစ်နေသူများ။
အတွက် ဒီ Content Writer Service လေးက အဆင်ပြေစေမှာပါ။
Content Writer တယောက်လိုအပ်လို့ အလုပ်ခန့်မယ်ဆိုရင် IT ပိုင်းနဲ့မကင်းသူ( ကွန်ပြူတာ or Mobile များကို ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး စာရေးသားတတ်သူ)မျိုးကို ခန့်အပ်ရမှာဖြစ်လို့ အနည်းဆုံး ၃ သိန်းလောက်ကနေစပြီး လစာပေးပြီးခန့်အပ်နေရမှာပါ။ ထို့အတူ Content တခုလိုအပ်လို့ Freelance Content Writer ဆီမှာ အလုပ်အပ်မယ်ဆိုရင် စာ ၁ ပုဒ်ကို အနည်းဆုံး ၈၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ လောက်အထိပေးပြီး ရေးခိုင်းရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ OSC-Myanmar ( Online Service Center Myanmar ) အနေနဲ့ကတော့ ၁ လကို ၁ သိန်းကျပ်အတိနဲ့ Content Writer Service ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
ဥပမာ - မိမိမှာ Page တခုရှိတယ်ဆိုရင် ၁ လကို အနည်းဆုံး ၃ သိန်းကစပြီးပေးရမယ့် ဝန်ထမ်းတယောက်ခေါ်ခန့်စရာမလိုတော့သလို Content ၁ ပုဒ်ကို ၁၀၀၀၀ လောက်ပေးပြီးရေးခိုင်းရတာမျိုးတွေလုပ်စရာမလိုပဲ ၁ လ လုံးစာမှ ၁ သိန်းကျပ်အတိသာ ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Content Writer Service ( 1 Month ) - 100000 Ks.
Email - mr.aungkyawsoe.hgc@gmail.com
LIVE Chat Message( Page ) - m.me/OSCMyanmar.mm
LIVE Chat Message( Account ) - m.me/aungkyawsoe.sb